Insizakalo Yomenzeli Ebhalisiwe kuwo wonke ama-50 States
Umenzeli obhalisiwe udinga ngokusemthethweni ngokomthetho inkampani enenkampani noma yesikweletu esilinganiselwe cishe kuwo wonke amandla. Umenzeli obhalisile wemukela amadokhumende asemthethweni futhi angasiza ekuqinisekiseni ukuthi kufakwa amadokhumenti athile ukuze inkampani ibe nokuma okuhle. Ngakho-ke, i-ejenti ebhalisiwe kufanele itholakale ekhelini lendawo eboniswe kumarekhodi womphakathi ukusuka ku-9 am kuya ku-5 pm phakathi nesonto. Izinkampani Ezihlanganisiwe zinikezela ngezinsizakalo ze-ejenti ezibhalisiwe kuzo zonke izifundazwe ezingamashumi amahlanu nezindawo eziningana zaphesheya. Sicela uxhumane nomuntu ozwana naye ukuze uthole okuningi ngale nsiza. Ama-ejenti abhalisiwe adingeka ngokomthetho yizifunda eziningi.
Izinkampani Ezihlanganisiwe zinikeza insiza ye-ejenti EMAHHALA ebhalisiwe ngawo wonke amaphakheji wokufakwa konyaka wokuqala.